IMicrosoft yokuThabatha inyathelo eliya emva ngo-Outlook 2007 | Martech Zone
IMicrosoft ithatha inyathelo eliya emva nge-Outlook 2007
NgoLwesine, uJanuwari 11, 2007 NgoLwesine, uJanuwari 18, 2007 Douglas Karr
Enkosi kubantu ngaphaya Indawo yokuhlala ngokuba le iintloko phezulu.
Zizigqibo ezinje ezikwenza uzibuze ngeMicrosoft. Kunye I-Outlook 2007IMicrosoft ayisayi kunikezela ngokunikezela nge-imeyile isebenzisa isikhangeli. Endaweni yoko baya kusebenzisa iLizwi.
Oku kuya kukhokelela kwezi zithintelo zilandelayo kwi-Outlook:
Akukho nkxaso kwimifanekiso engemvelaphi (HTML okanye i-CSS)
Akukho nkxaso kwiifom
akukho nkxaso yeFlash, okanye ezinye iiplagi
Akukho nkxaso kwi-CSS floats
Akukho nkxaso yokutshintsha iibhulethi kunye nemifanekiso kuluhlu olungacwangciswanga
Akukho nkxaso kubume beCSS
akukho nkxaso kwii-GIFs zoopopayi
Iinkcukacha ezithe kratya.
Intengiso ye-imeyile esekwe kwimvume ekugqibeleni ifumana ukwamkelwa kunye nokukhula kunye nokuqhelekileyo. Ukunxibelelana kwabafundi kukude njengeyona 'nto inkulu' ilandelayo ngokwenza umsitho kunye nokudibana kwedatha okongeziweyo.
Ndisebenzela umniki-nkonzo we-imeyile osekwe kwimvume, bendijonge phambili kulwakhiwo olutsha kubathengi be-imeyile- izinto ezinje ngeFlash kwi-imeyile, iVidiyo kwi-imeyile, Ingxoxo kwi-imeyile, kwanezicelo ze-imeyile ezityebileyo ezinokuthi zivumele abantu ukuba basebenzisane neebhanki zabo, sebenza, izihlobo zabo, kunye nezicelo zabo ngokukhuselekileyo nangokukhuselekileyo.
Kubonakala ngathi iMicrosoft iza kuyitshintsha loo nto. U-Microsoft ulawula intengiso ye-imeyile… ke banethuba lokutyebisa amava abathengi ngokwenza izinto ezintsha ngemveliso yabo. Njengenkokheli yentengiso, luxanduva lwabo. Endaweni yoko, kubonakala ngathi bathathe indlela elula kwaye basilela kumceli mngeni.
Olu luhlobo lwezigqibo ezimele ukuba nolunye uphuhliso lwabathengi be-imeyile. Ukuba awukaliva igama Thunderbird… Uzokuthanda kulo nyaka!
Kukho abo bakwi-IT abanokucinga ukuba le yintsikelelo, mhlawumbi bayagula kwaye badiniwe kukukhathazeka ngemicimbi yezokhuseleko enxulumene ne-imeyile. Nangona kunjalo, ubomi babo buye baba nzima ngakumbi. Olu hlobo lwesigqibo lwenza ukuba abasebenzisi bakhuphele kwaye bafake ezinye usetyenziso ezithi ngeke ukuxhasa ukusebenzisana okucebileyo abafuna. Ngoku kufuneka ixhalabe malunga nokulandelayo kunye nendlela yokuyilawula.
Umzekelo omnye: Ndiyakhumbula xa abantu be-IT bekwinkampani enye enkulu bendisebenzela izihlomelo ezivaliweyo kwi-imeyile. Ngenxa yoko, wonke umntu okule nkampani uphuma nje waya kufumana idilesi ye-hotmail. (Ndagqibela ukuva, kunjalo nangoku kubo).
NdiyiMicrosoft. Unokwenza ngcono kakhulu kunale! Olu luhlobo lwesigqibo esingenantlonelo esiya kubangela usizi oluninzi kunye nabanikezeli beenkonzo ze-imeyile, iiarhente, abathengisi… kwaye ngaphezu kwako konke, abasebenzisi bakho.
Jan 11, 2007 ngo-11: 21 PM
Ndiyazi ukuba ndiyekile ukusebenzisa i-Outlook ngolu hlobo lutsha kunye nomzuzu weendudumo owenza i-beta ejikelezayo ndiza kujonga kwakhona; ngakumbi inikezwe ukongezwa kokumakisha.
Jan 16, 2007 kwi-10: 22 AM
Abantu kuphela abakhathalele i-Outlook 2007 basebenzise iLizwi ukunikezela nge-imeyile, kunye nelahleko yezi zinto sele zikhankanyiwe bayili kunye nabaphuhlisi. Hayi ABASEBENZI!
Ngowuphi umsebenzisi othethileyo? Ndinqwenela ukuba ndizifumane eziimeyile zokuthengisa ezingenantsingiselo!
Uthethe wuphi umsebenzisi? Ndingahamba nomfanekiso omkhulu wemvelaphi yee-imeyile zam!?
Ngowuphi umsebenzisi othethileyo? Ndinqwenela ukuba ndingalandelela ukubala okuvulekileyo kwee-imeyile zam!?
Jan 16, 2007 kwi-11: 14 AM
Ngentlonelo andivumelani nawe kwaye ndiyazi, ngokusekwe kwiminyaka yedatha, ukuba umncinci. Abasebenzisi abayonwabeli ogaxekile, kodwa bayayonwabela i-imeyile entle kunye nomxholo abawufunayo. Abaxhasi endisebenza nabo abafumani naluphi na uguqulo kwii-imeyile ezisekwe kwisicatshulwa. I-imeyile ye-HTML iyavulwa, icofwe, kwaye iguqulwe ngokwenqanaba lokubonisa.
Ii-imeyile ezingenantsingiselo akufuneki zithunyelwe. Nangona kunjalo, ukuthumela i-imeyile efanelekileyo kunye nomxholo olungileyo ngexesha elifanelekileyo kufuna ukuba umkhondo uvule, ucofe uguquko kunye nokuguqula ii-imeyile ukuze ufumane ukuba yeyiphi incasa yakho. Sicebisa abathengi bethu ukuba bathumele ii-imeyile ezincinci kwizinto ezincinci ezinomxholo ekujoliswe kuwo ukufumana iziphumo… kwaye iyasebenza. Kwimeko apho, uphando luyinto emnandi yokuqokelela idatha kumthengi kunye nokubanika oko bafuna.
Endaweni yokufumana i-imeyile engenanto engenanto, ngaba bekungayi kuba kuhle ukufumana uphando olukubuza ukuba ngaba isihloko besinxulumene nawe? Kwaye ngokusekwe kule mpendulo, inkampani iphendula ngokufanelekileyo? Abathengi be-Outlook 2007 abayi kuba naloo mava enkosi kwisigqibo esithile se-nutty sokunyuka komyalelo.
Kufana nokuhamba kwindawo yokutyela oyithandayo apho balaziyo igama lakho, itafile yakho oyithandayo, kunye nendlela othanda ngayo ukutya kwakho. Abakhange bayenze loo nto ngaphandle kokuqokelela olo lwazi kuwe. Akunomahluko kwiwebhu okanye nge-imeyile!
Jan 16, 2007 kwi-11: 38 AM
Ngaphandle kokujonga kunye nokuziva kwe-imeyile, unokwenza konke ngokwezifiso kwisicatshulwa. Kodwa andiyiphikisi into yokuba abasebenzisi bathanda ii-imeyile ezintle, ndiyayenza. Into endizama ukuyifumana kukuba ii-imeyile ngamaxwebhu, hayi amaphepha ewebhu. Uya kuba nakho ukongeza inkqubela phambili kwii-imeyile zakho nge-WPF \_ E kunye nezinye izinto ezizayo. Zonke ezi ziya kuba liqonga elizimeleyo kwaye ziya kuvumela umyili ukuba abe ne-grater engaphezulu kune-html, kubandakanya ukuhlangana okupheleleyo kwe-3d.
Esona sizathu siphambili sokuba umnikezeli we-IE asuswe kukuba kukho ukufikelela kwi-grater kwiWindows API. Kwaye ukuba naziphi na iibhokisi "zoKhuseleko" zingenelela ngaphakathi zifana nokuthi "Kulungile" njengayo nantoni na.
Yiyo loo nto kuthintelwa uninzi lwezincamathiselo ezingakhuselekanga kuzo zombini iklayenti kunye nenqanaba lokuNgaphandle. Uya kuthi kodwa uvumeleke ukuba usebenze .Izicelo ze-NET kuloo ndawo ikhoyo njengazo zonke ii -apps ze-NET ezivela kwimithombo engasetyenziswanga ebaleka kwindawo ekhuselekileyo, eqinisekisiweyo ethintela ukufikelela ngelixa ingaphazamisi ubutyebi bomxholo.
Ukufudukela kwifomathi ye-imeyile ye-OpenXML kukubetha okubalaseleyo kweMicrosoft. Kuthetha ukuba ukuthengiselana kwabo kuyasebenzisana nezinye iimveliso ze-OpenXML ezinjenge StarOffice kunye neOpenOffice. Oku kuyakuvumela abasebenzisi ukuba bashenxise kubaxhasi, kunye nabanye abanjengo-Outlook Express ukuya kwi-Outlook ngaphandle kokuya kwifomathi ye-imeyile efanelekileyo.
Jan 16, 2007 kwi-11: 40 AM
Izinto zoncedo ngesiNgesi esibi! Ingqondo yam isebenza ngokukhawuleza kuneminwe yam!
Jan 16, 2007 ngo-1: 02 PM
Ndihlala ndihlela ukungena kwam amaxesha ama-2 okanye ama-3 emva kokuba ndizifumene iimpazamo! Akukho maxhala.
Amanqaku akho abalasele… kodwa ndicinga ukuba kufuneka sicele umngeni kwi-imeyile njengendlela yothutho. Khawufane ucinge ukuba i-imeyile emnandi inokuba njani ngokusebenza kunye nokudityaniswa!